stop - Synonyms of stop | Antonyms of stop | Definition of stop | Example of stop | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for stop
Top 30 analogous words or synonyms for stop
အင်ဗာတာ အရင်ဦးဆုံး အင်ဗာတာ ကိုstart/stop လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် (direct on line) ပုံစံ ဆားကစ် တစ်ခုလိုပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားငွေ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကိုလည်း One Stop Service အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ပေးချေမှုများအတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
မြန်မာအက္ခရာ There are two primary break characters in Burmese, drawn as one or two downward strokes (၊ or ။), which respectively act asacomma andafull stop. ၏ is used asafull stop if the sentence immediately ends withaverb. ၍ is roughly the equivalent ofacomma and is used to connect two trains of thought.
မီးရထား မြို့ကြီးများအကြားဆက်သွယ်သော ရထားများကို အုပ်စု ၂ခုခွဲနိုင်သည်။ မြို့ကြီးများသွားရထားများ (inter-city trains) သည် ဘူတာရုံအသေးလေးများတွင် မရပ်နားပေ။ အခြားအုပ်စုမှာ ဒေသတွင်းသွားရထား (local trains or "stoppers") သို့မဟုတ် ဘူတာရုံတိုင်းတွင် ရပ်နားသော ရထားများဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အနေဖြင့် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရပ်နားသော ရထားများ (limited-stop) လည်း ရှိသည်။
Thrash metal Thrash သည် လျင်မြန်သောအရှိန်နှုန်းနှင့် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းသည် ဆူညံသောဒရမ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒရမ်သမားများသည် two bass drum သို့ double-bass pedal များကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Cymbal stop/chokes တေးဂီတ၏အရှိန်နှုန်းမြင့်ရန် riff တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကူးအပြောင်းတွင် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစား၏လက္ခဏာများမှာ မြန်ဆန်သောဂီတာ Riff များနှင့် ပေါက်ကွဲသော picking style နှင့်မြန်သော ဂီတာ solo များနှင့် ကျယ်ပြန့်သော two bass drum များကို သမားရိုးကျ အသုံးပြုခြင်းများကို ဆန့်ကျင်ပြီး အသုံးပြုကြသည်။ ဘေ့စ်ဂီတာသမားများသည် plectrumများကို အသုံးပြုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ တစ်ချို့ထင်
အင်ဗာတာ အထက်ပါ (ပုံ၁)အတိုင်း pb1a (start) ကိုနှိပ်လိုက်ရင် CR1 energize ဖြစ်ပြီး အင်ဗာတာမှ +24 နဲ့LI1 ကိုဆက်ပေးပြီးrun ပါတယ် ။ pb1 ကိုနှိပ်ရင်တော့ stop ပေါ့နော်။ R1C နဲ့R1B ကတော့ အင်ဗာတာfault relay n/c ပါ ။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာ close ပေါ့ drive ကို supply ပေးလိုက်မှ open ဖြစ်ပါတယ်။ fault ဖြစ်လို့ရှိရင် close ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ fault ဖြစ်တဲ့ အခါ CR4 energize ဖြစ်ပြီး ပတ်လမ်းကို ဖြတ်ပေးပါတယ်။
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ While interned after the war by the British at CSDIC camp 11, Dornberger was recorded saying that he had begged the Führer to stop the V-weapon propaganda, because nothing more could be expected from one ton of explosive. To this Hitler had replied that Dornberger might not expect more but he certainly did.
Grunge Tempoများ၊ မညီညာသော ဟာမိုနီများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော တီးခတ်ပုံများပါဝင်သည်။ heavy metal ကို ပြန်လည်တွေးတာထားသည်။ တစ်ချို့ပုဂ္ဂလိကများသည် grunge ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ Sub Pop producer Jack Endinoနှင့် Melvins တီးဝိုင်းတို့ပါဝင်ပြီး grunge ၏ ပေါင်းစပ်ခဲ့ပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ Kiss ၏ musical provocation ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် Nivana၏ stop-start သီချင်းသည် အမျိုးအစားထဲတွင် ပူးပေါင်းလာခဲ့သည်။ Allmusic က grungeကို hyrid of heavy metal and punk ဟုဆိုခဲ့သည်။ keyboard များမှာ grungeဂီတတွင် အသုံးမပြုသော်လည်း Seattle တီးဝိုင်းသည် Gorrila သည်guitar ချည်းသုံးခြင်း ရှောင်ကြဉ်၍ ၁၉၆၀ ပုံစံ Vox organ ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။